प्रचण्ड तातोपानी कुण्डमा
रिक्त राजदूतमा पदपूर्ति हुँदै
मानवीय कारणले हुने क्षति न्यूनीकरणमा सतर्कता: गृहमन्त्री थापा
भाग्य बोक्ने झोला अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह
झापा, १८ कात्तिक । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल सामाजिक संस्था पहिलो पाइला नेपालले भाग्य बोक्ने झोला अभियानमा सम्पूर्ण सहयोगी दाताहरुलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ ।
झापाको बिर्तामोडमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनका बोल्दै संस्थापक महासचिव विजय खड्काले सो अभियानका क्रममा ५ लाख रुपैँया लागत लाग्ने र हालसम्म १ लाख रुपैँया मात्र संकलन भएको जानकारी दिए । बाँकि रकम जुटाउन संस्थाले मात्र नसक्ने भएकाले सम्पूर्णलाई सहयोगको अपिल गरेका हुन् । संस्थाले वि.सं. २०७४ माघ १० गते लमजुङ्गका ३ विद्यालयका ५० जना विपन्न तथा असक्ष्म परिवारका बालबालिकाहरुलाई झोला वितरण गरि अभियानको सुरुवात गरेको थियो । सोहि कार्यक्रमबाट एक बर्ष भित्र देशभरका एक हजार जना बालबालिकालाई शैंक्षिक सामाग्री सहितको झोला वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यसरि वितरण गरिने एक हजार झोलामा झोलासँगै १७ सय ७० बराबरको शैंक्षिक साम्रागी समेत उपलब्ध गराइने पहिलो संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण अग्रवालले जानकारी दिए । एक हजार झोला वितरण गरिने भनेर थालनि गरिएको यस अभियान मार्फत लमजुङ्, कपिलवस्तु, सिन्धुली, विराटनगर, पोखरा, रसुवा, गुल्मि, झापा, भक्तपुर, गोठगाउँ, बुटवलमा गरी ७ सय ४५ वटा झोला वितरण भइसकेको उनले बताए । अभियानलाई पुरा गर्ने क्रममा यहि मंसिर १ गते पाल्पामा र मंसिरको दोस्रो हप्ता अर्धखाचीमा २ सय २५ वटा झोला बितरण गरिने निश्चित भएको समेत उनले जानकारी दिए ।
अभियानको लागत रकम संकलन गर्न संस्थाले नेपालिहरुको दोस्रो महान चार्ड तिहारमा देउसीभैलो कार्यक्रको समेत तय गरेको छ । झापा सहित संस्थाको शाखा रहेको अन्य विभिन्न ठाउँमा समेत देउसीभैलो कार्यक्रम गरिने संस्थाका सचिव मदन आलिले जानकारी दिए । साथै सो कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई साथ दिन समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
संस्थाले भाग्य बोक्ने झोला अभियान सँगसँगै कैलालिको मोन्याल गाउँपालिका वडा नंं. ६ मा रहेको कचालि बाल शिक्षाको भवन पनि निमार्ण गर्ने भएको छ । जसको लागि अनुमानित ६ लाख रुपैँया लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सहयोग गर्न चाहने सम्पूर्ण इच्छुकले तलको ठेगनामा सम्र्पक गर्न आग्रह गरेका छन्ः–
Muktinath Bikash Bank ilt.
A/C Holder Name:- Pahilo paila Nepal
Online Donation:- https://pahilopailanepal.org/donate
Contact:- 9810516312, 9864240965
शुक्लाफाँटाका पाँच विद्यालयमा न्यून ...
विद्यालयमा तीन लाखको अक्षयकोष स्थापना
सहयोगको पर्खाइमा दलित विद्यालय
पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव
1 छठका लागि मेची नदीमा पाँच हजार पूजास्थल
2 सरकारले भताभुङ्ग बनाएका काम टाल्दैछः उपनेता नेम्वाङ
3 सहकारीको ६६ लाख रुपैँया हिनामिना गर्ने पक्राउ
4 माछापालनबाट मनग्य आम्दानी
5 मिथिलाञ्चलमा आजदेखि सामाचकेवा पर्व शुरु
6 मानवीय कारणले हुने क्षति न्यूनीकरणमा सतर्कता: गृहमन्त्री थापा
7 काङ्ग्रेस नेता उप्रेतीको निधन